आमा को कोखबाट जन्म लिएको हुनुहुन्छ भनि एकचोटी सुन्नु होला !! - Enepalese.com
वासिङटन डिसी 13:57
आमा को कोखबाट जन्म लिएको हुनुहुन्छ भनि एकचोटी सुन्नु होला !!
इनेप्लिज २०७३ फागुन ११ गते ३:३६ मा प्रकाशित
आमा को कोखबाट जन्म लिएको हुनुहुन्छ भनि एकचोटी सुन्नु होला !! त्यति मात्र कहाँ होर ३ करोड नेपाली हरु जो आमा को कोख बाट जन्म लिय उनीहरुलाई पनि सुन्ने मौका दिनु होला सक्दो शेयर गर्नु होला … भिडियो सहित !!
आमा हुन सजिलो छैन । आमा बन्नु मृत्युको नजिक पुग्नु हो । आमा बन्नुको अर्थ मृत्युलाई जित्नु हो । मृत्युलाई जित्नु सामान्य कुरा होइन । त्यसका लागि अदम्य साहास चाहिन्छ । त्यो साहास केवल एउटी आमामा मात्र निहीत हुन्छ । महिलाले वहन गर्ने विभिन्न थरीका भुमिका मध्ये सबैभन्दा सम्मानजनक भुमिका आमा नै हो । महिलाका लागि प्रयोग गरिने सबैभन्दा वजनदार शब्द पनि आमा नै हो । आमा धर्ती हुन्, आमा श्रृष्टि हुन् । आमा सौन्दर्य हुन्, आमा रहस्य हुन् । एउटै शरीरमा दुईटा ढुकढुकी जीवित राख्ने, आमा आश्चर्य हुन् ।